Tetikasa fanitarana ny seranan-tsambo any Amerika Latina dia Mampiasa Dredges Ellicott roa
Novambra 11, 2015
Ellicott roa famonosana mikotrika fanoratana ampiasaina ankehitriny amin'ny fanitarana seranana lehibe any Amerika Latina. Ity dia ampahany amin'ny tetikasa fampitomboana ny fahafaha-mitantana ny kaontenera ao amin'ny seranan-tsambo ary mahazaka ny sambo Post-Panamax. Ny dredge Ellicott voalohany, andiany 370 misy paompy 12 ″ x 10 ″ (300 x 250 mm) sy 440 HP (328 kW) izay misy herinaratra napetraka rehetra dia niasa tao amin'ity seranana ity nandritra ny enim-bolana mahery. Ity dredge 370 ity dia niaraka tamin'ny dredge Series 670, niaraka tamin'ny paompy 14 ″ x14 ″ (350 x 350 mm) ary 800 HP (597 kW) tanjaka tanteraka. Elicott dia afaka nisambotra vao tsy ela akory izay lahatsary ao amin'ny Dredge Dragon 670 ao amin'ny toeram-piasana. Samy ao am-panaovana ny fanadinadinana ny faritra beretah ho an'ny terminal vaovao ny roa tonta.
Ny 370 sy 670 dia dredge portable, nefa masiaka sy azo itokisana ihany koa - tsara ho an'ny karazan-doka rehetra amin'ny dredging anisan'izany ny seranana port Izy ireo no dredges mahery indrindra amin'io karazana habe io.
Amin'ny fomba mahazatra, ny tetikasa fanitarana seranan-tsambo toa an'io dia ampiasaina amin'ny fampiasam-bolan'ny hopotaly hipotika (TSHD) na làlam-pandrika ho an'ny hafa. Amin'ny tranga sasantsasany, ny dredges mpandeha kely azo tsapain-tanana kely dia vahaolana tsara kokoa noho ny fahatomombanan'izy ireo, ny fisian'izy ireo, ny famokarana ambony ary ny vidiny mora. Ireo tombony azo avy amin'ny dredge sela mikapoka azo ampiharina ihany koa dia mihatra amin'ny fanamboarana ny seranan-tsambo, indrindra raha tsy maintsy atao tsy tapaka ny fanodinana.
Jereo ny rakitsary drôna fanampiny an'ny Ellicott 1870 Dragon dredge natomboka tamina tetikasa hafa any Amerika Atsimo.